Siminaarada ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliya qabtaan: Shaah dan leh | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Siminaarada ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliya qabtaan: Shaah dan leh
Siminaarada ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliya qabtaan: Shaah dan leh
Maalmahan dambe waxaaa soo kordhay barnaamijyo lagu sheegay siminaarro ay dhallinyaro u qabtaan xisiyada diwaan gashan ee dalka ka jira kuwaas oo muran inta badan abuura.
Ma mar iyo laba inta jeer ay dowladda is hortaagtay ama albaabada isugu dhufatay siminaarro ay soo abaabuleen qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira sida Wadajir iyo xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiga.
Waxaa la xasuustaa maalin kahor mid ay xisbiga Wadajir u qabteen dhallinyaro da’yar oo ay dowladda horistaagtay kaas oo maalin kahor isla sidaas ay Baydhabo uga celisay xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiga.
Arrimahan siyaasadda Soomaaliya ku soo kordhay waxa ay dhaliyeen muran xilli ay mas’uuliyiinta xisbiyada ka cawdeen jujuubka iyo caburinta dowladda.
Dhinaca dowladda wali kama bixin jawaab ku saabsan sababta ay tallaabooyinkaas u qaadeyso walow ay jiraan tuhun ah in ay fulineyso amarro ay hore u bixisay oo diidayey in la qabto kulamo siyaasadeed oo aysan dowladda la socon ama amar looga qaadan.
Si walba oo ay ahaataba, waxa ay bulshada is weydiinayaan ciyaartan cusub ee aan waxba ka badalneyn riwaawad ciyaaleedka lagu jilo KARTOONKA caanka ah ee loo yaqaan ‘Tom and Jerry!;
Hase yeeshee, markii aan maska tuujiyey oo aan rog rogay arrintan waxaan soo xusuustay sheeko magaaleed caan ah oo aan ku soo koobay waxa uu salka ku hayo SIMINAARRO SIYAASADEEDKAN bilowday dabayaaqadii 2018 lana jaanqaaday 2019!
SHEEKO MAGAALEEDKA CAANKA BAXDAY!
Nin dhallinyaro ah ayaa hadda kahor laga hayyaa in uu ku kaftamay ama uga baxday dhaqanno laga yaqaan maqaayadaha ay gabdhaha shaaha ku ka riyaan “SHAAH DAN LEH!”
SHAAH DAN LEH?
Maqaayadaha lagu cabo shaaha ee ku teetsan laamiga waa ka caan gayyiga Soomaaliyeed oo badanaa waxaa ka ganacsata hablo/gadho.
Maqaayadahaas waxaa u soo sheeko iyo shah taga rag isugu jira dhallinyaro iyo rag waayeen!
Asxaabtaas soo shaah iyo sheekaba tagta waxaa loo qeybaa laba; 1. Kuwo shaah raadis ah oo aan wax kale u dheereyn 2, kuwo shaaha ugu hoos duugan yahay haasaawe!
Kuwa labaad, ee shaaha ku soo raadsada in ay kula sheekeysteen ama kula haasaawaan xataa haddii aysan shaah cabbid ka hayn, badanaa waa WAAJIB in ay dalbadaan shaaha, is ag dhigaan oo ay koobkaas saacad, laba ama saddex uu horyaal ama kabashada u beekhaamiyaan si joogista maqaayada ugu dheeraado! SHAAHAAS WAA MIDKA LOO BIXIYEY SHAAH DAN LEH!
Hadaba, soo lama oran karo SIMINAARADA ku cusub siyaasadda Soomaaliyeed, dowladdana ka daali weysay is hortaagooda, xisbiyadana ka nasan waayeen qabashadiisa, waa SIMINAARRO DAN LEH!?
Danta siminaaradaas waa xaajo kale oo qofba si ula muuqato, balse waxaa xaqiiq ah in xisbiyada iyo dowladda iska dhex arkeen biyaha hoostooda oo ay sheekaduba ka gudo ballaaran tahay caburin iyo arrimo kale!
Previous articleSomaliland oo shegtay in qorshe halis ah oo loogu maleegay ajnabiga ay DF u wado Bankiga Dhexe
Next articleSomaliland oo hay’ad TURKISH ah ka cayrisay deegaanadeeda(Sababta oo lagu sheegay)
Dhageyso: Nabad Suggida Jubbaland oo sheegtay inay jiraan ganacsato Shabaab xiriir la leh
Faah Faahin dheeraad ah”Qeyb Ka Tirsan Baarlamaanka Galmudug Oo Casilay Guddoomiye Casir..Galmudug Imisa Xildhibaan ayey leedahay?!
DHAGEYSO:Taliye Kuxigeenkii NISA Cabdalla Cabdalla Oo Xog Badan Soo Bandhigay//Bur burka NISA
10 ruux oo lagu dilay Muqdisho iyo hareeraheeda 24-kii saac ee la soo dhaafay…
Madaxweyne Isaias Afwerki oo balan qaad aan horay loo maqal u sameeyay Aby Ahmed
Madaxweyne Lafta gareen Oo Deg Deg Looga Yeeray Muqdisho,Villa Soomaaliya Oo Weydiin Doonta…